Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) - Hello Sayarwon
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး))
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး))
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ကဘာလဲ။
Generic Name: Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ဟာ ပိုလီယိုရောဂါကာကွယ်ဆေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ခုခံအားစနစ်တွေ ခန္ဓါကိုယ်ကနေ ထွက်ရှိလာအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး အသက်ခြောက်ပတ်ရှိတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး စတင်ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသား လူကြီးတွေအတွက်လည်း အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာ ထိုးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပိုလီယိုအဖြစ်များတဲ့ ဒေသကို ခရီးသွားမယ့်သူတွေ။
ပိုလီယိုဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓါတ်ခွဲခန်းထဲမှာ ကိုင်တွယ်နေရတဲ့သူတွေ။
ပိုလီယိုလူနာတွေကို ပြုစုကုသပေးနေရတဲ့သူတွေ စတဲ့သူတွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး ထိုးထားသင့်ပါတယ်။
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဒီဆေးကို ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ကျန်းမာရေးပညာရှင်ကသာ ထိုးပေးသင့်ပါတယ်။
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကို ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ vaccine poliomyelitis injection (IPV) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။(ယေဘူယျအသိပေးချက် – ဆေးဝါးအများစုကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းခြင်းတော့ မပြုလုပ်ရပါ)
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကိုမသုံးစွဲခင်မှာ အောက်ပါအချက်တွေရှိရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုပြောရပါမယ်။
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း။
အခြားသော နာမကျန်းမှုများ၊ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးမထိုးထားတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ခုခံအားကျဆင်းနေတဲ့ သင့်အိမ်သားတွေထံကို ပိုလီယိုရောဂါ ကူးစက်နိုင်ချေ အပုံ ၂.၂ သန်းပုံမှာ ၁ ပုံလောက် ရှိနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာတွေ ရှိတယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။ အသက် ခြောက်ပတ်အောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ အသက် ခြောက်ပတ်အထက် ကလေးတွေမှာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက လူကြီးတွေမှာဖြစ်တာနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးဝါးအများအပြားကို အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ စမ်းသပ်ထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဒီဆေးက ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကို သေချာစွာ မသိရပါဘူး။ အတိအကျ လေ့လာထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မရှိသေးသည့်တိုင် အသက်ကြီးသူတွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဟာ လူငယ်၊လူရွယ်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ အတူတူပဲ ဖြစ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
အောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်၊သူနာပြုတို့ကို အမြန်အသိပေးပါ။
အသက်ရှုရခက်ခြင်း၊အစာ၊ရေ စသည် မြိုရခက်ခဲခြင်း။
ယားယံခြင်း (အထူးသဖြင့် ခြေလက်များတွင်)။
အရေပြား နီရဲခြင်း (အထူးသဖြင့် နားရွက်တဝိုက်တွင်)။
မျက်လုံး၊မျက်နှာ သို့မဟုတ် နှာခေါင်းအတွင်းသားတို့ ဖောင်းကားရောင်ရမ်းခြင်း။
အဖျားကြီးခြင်း (၁၀၂ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက် သို့မဟုတ် ၃၉ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ထက် များခြင်း)။
ဘယ်ဆေးတွေက Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Vaccine poliomyelitis injection (IPV) ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အောက်ပါကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ ရှိနေရင်ပေါ့။
မိသားစုထဲတွင် ခုခံအားချို့တဲ့ခြင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများဖြစ်ဖူးသူ ရှိခြင်း။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေးတခါမှ မထိုးဖူးတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ စုစုပေါင်း သုံးကြိမ်ထိုးရပါမယ်။ ပထမတကြိမ် ထိုးအပြီး တလကနေ နှစ်လအတွင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်ထိုးရမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် ခြောက်လကနေ ဆယ့်နှစ်လအကြာမှာ တတိယအကြိမ် ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးဖူးတယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်အရွယ်ကတည်းက ထိုးဖူးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ် စုစုပေါင်း တကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးငယ်တွေမှာ ပိုလီယိုကာကွယ်ဆေး စုစုပေါင်း လေးကြိမ် ထိုးရမှာ ဖြစ်ပြီး အသက်၂လ၊၄လ၊ ၆လ – ၁၈လ နဲ့ ၄နှစ် – ၆နှစ် အရွယ်တွေမှာ ထိုးရမှာပါ။ ဆေးတကြိမ်နဲ့ တကြိမ်အကြား အနည်းဆုံး ရက်သတ္တပတ်လေးပတ်ခွာပြီးမှ ထိုးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးပထမအကြိမ်ကို ကလေးအသက်ခြောက်ပတ်လောက်မှာ စတင်ပေးနိုင်ပါပြီ။
Vaccine Poliomyelitis Injection (Ipv) (ပိုလီယိုရောဂါ ကာကွယ်ဆေး (ထိုးဆေး)) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
vaccine poliomyelitis injection (IPV) ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီကာကွယ်ဆေးဟာ ရက်အတိအကျ ထိုးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးတကြိမ်ထိုးဖို့ လွတ်သွားရင် ဆရာဝန်နဲ့ တတ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံး ဆက်သွယ်ပါ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ အောက်တိုဘာ 28, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇန်နဝါရီ 14, 2018
Vaccine poliomyelitis injection (IPV). http://www.mayoclinic.org/drugs-
supplements/poliovirus-vaccine- inactivated-injection- route/description/drg-
20069860. Accessed December 22, 2016
Vaccine poliomyelitis injection (IPV). https://www.drugs.com/mtm/polio-
vaccine.html. Accessed December 22, 2016